Timberland Men's Radford Rubberized 6'' Waterproof: Buy Online at Best Prices in Myanmar | Shop.com.mm
Timberland Men's Radford Rubberized 6'' Waterproof
More Men from Timberland
Yangon, Yangon City, Botataung
Product details of Timberland Men's Radford Rubberized 6'' Waterproof
Coated synthetic fabric upper
E V A footbed
This product is available now at shop.com.mm online shopping.
Timberland is an American manufacturer and retailer of outdoor wear withafocus on footwear. Best known for making men's footwear, Timberland manufactures mainly hiking boots, and outdoor casual footwear. Timberland footwear is marketed towards people intending outdoor use.
In 1973, Timberland introduced its first waterproof leather boot, setting new standards for durability and protection for the outdoors. Well-crafted, dependable and authentic, it stands asasymbol for everything Timberland makes. Timberland gears are built withapassion for the outdoors that’s reflected in its commitment to the environment which is to get you outdoors comfortably and confidently.
Specifications of Timberland Men's Radford Rubberized 6'' Waterproof
Ratings & Reviews of Timberland Men's Radford Rubberized 6'' Waterproof
Other questions answered by MK Lifestyle (3)
shop.com ကိုဖုံးဆက်မေးတော့ stocks ကုန်သွားလို့ cancelledလို့လုပ်လိုက်တာတဲ့။ကုန်ရအောင်လဲ discount စချတဲ့နေ့ထဲကယူထားတာပဲ။
Hein Z. -3months ago
မင်္ဂလာပါ အစ်ကို ခင်ဗျ။ ကျွန်တော် တို့က STOCK တစ်ကယ် ကုန်သွားလို့ပါ ခင်ဗျ။ ပစွည်းးကလည်း အများကြီး မကျန်တေ့တဲ့ အတွက်ကြောင့်ပါခင်ဗျ.။ ပစွည်းကုန်သွားတဲ့ အတွက် စိတ်မကောင်းပါဘူးခင်ဗျ။ နောက်ထပ်လည်း အသစ်တွေ ထပ်ရောက်နေတာ မို့လို့ သည်းခံပြီး ၀ယ်ယူအားပေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် ခင်ဗျ။
MK Lifestyle - answered within4weeks
Cancelled မှားလုပ်ခံထားရတဲ့အော်ဒါကဒီလဧပြီ(၅)ရက် ည 21:42မှာတင်ထားတဲ့ အော်ဒါ ဖြစ်ပါတယ်။ဖုံးနံပါတ်က အရင်အဟောင်းနံပါတ်ပြန်ပြောင်းထားပါတယ်။
ဒါကိုဧပြီလ (၅)ရက်နေ့က discount ချတဲ့နေ့ကယူထားတာကိုshop.com ကလည်းဖုံးဆက်တော့ ယူမယ်ဆိုပီးသေသေချာချာပြောထားတယ်။လာမပို့သေးလို့ညကမှကြည့်လိုက်တော့ cancelled ဆိုပီးပြနေတယ် ။နောက်ထပ်တင်ထားတဲ့အော်ဒါတွေလည်း(၁၀)သိန်းဖိုးလောက်ရှိပါသေးတယ်